खराब गन्धबाट बच्न एयर कन्डिसनर सफा गर्छ | बेजिया
मारिया vazquez | 21/06/2022 12:00 | घर
के तपाईंले अन गर्नुभयो एयर कंडीशनिंग? हामीलाई कुनै शंका छैन कि गत हप्ता हामीले भोगेको गर्मीको लहरले, तपाईंहरू मध्ये धेरैले यो सुरु गरिसक्नु भएको छ। र सायद, धेरै महिनाको लागि बेरोजगार भएपछि, तपाईंले एक निश्चित अप्रिय गन्ध देख्नुभएको छ। चिन्ता नगर, एयर कंडीशनर सफा गर्नुहोस् र समस्या हट्नेछ।
वसन्तमा पुन: सुरु गर्नु अघि एयर कन्डिसनर सफा गर्न मात्र योगदान गर्दछ नराम्रो गन्धबाट बच्नुहोस् जसले यसको कुनै पनि भागमा फोहोर उत्पादन गर्न सक्छ। तर, यसको अतिरिक्त, यसले यसको ऊर्जा दक्षता सुधार गर्नेछ। हामीसँग यसलाई सफा गर्न सबै चालहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
जम्मा भएको फोहोर फिल्टरहरू, एक्सचेन्जरहरू, फ्यानहरू वा नालीहरूमा उपकरण खोल्दा अप्रिय गन्ध उत्पन्न हुन सक्छ। यसलाई अन्त्य गर्न र निष्कासन गरिएको हावालाई सफा र ब्याक्टेरिया मुक्त बनाउनको लागि सरसफाई मुख्य हो। यन्त्र बन्द गर्नुहोस्, अर्को चरण-दर-चरण पछ्याउनुहोस् र तपाईंसँग 30 मिनेट भन्दा कममा नयाँ जत्तिकै राम्रो हुनेछ।
1 सरसफाईको लागि चरण-दर-चरण
1.1 फिल्टरहरू सफा गर्नुहोस्
1.2 नाली सफा गर्नुहोस्
1.3 एकाइको बाहिरी भाग सफा गर्नुहोस्
2 कहिले सफा गर्ने?
सरसफाईको लागि चरण-दर-चरण
फिल्टरहरू सफा गर्नुहोस्
यिनीहरूको कार्य भनेको हावालाई फिल्टर गर्नु र ब्याक्टेरिया र अन्य सूक्ष्मजीवहरूलाई फैलाउन र उपकरणको सञ्चालनलाई नोक्सान गर्नबाट रोक्नु हो। फोहोर फिल्टरले उपकरणको दक्षता कम गर्छ र बाहिर निकालिएको हावाको गन्धको पहिलो कारण हो।
फिल्टरहरू स्प्लिटको आन्तरिक भागमा, ग्रिलको पछाडि अवस्थित छन्। सफाईको लागि तपाईंले तिनीहरूलाई हटाउनु पर्छ। यदि यो मर्मत सफाई हो भने, धुलो र फोहोरका केही निशानहरू हटाउन भ्याकुम क्लिनर प्रयोग गर्न पर्याप्त हुनेछ। तथापि, अझ राम्ररी वसन्त सफाईको लागि, आदर्श रूपमा तातो पानी संग तिनीहरूलाई कुल्ला र तिनीहरूलाई फिर्ता राख्नु अघि छायामा सुकाउनुहोस्।
नाली सफा गर्नुहोस्
ड्रेन प्यानमा जम्मा हुने कन्डेन्सेसनको कारण एयर कन्डिसनरहरूले पानी निकाल्छन्। जब यो पानी स्थिर रहन्छ - नलीमा खराब ढलानको कारण - यसले खराब गन्ध पैदा गर्न सक्छ र सुविधा दिन्छ। ब्याक्टेरिया र कवक को वृद्धि.
ट्यूब मार्फत कडा उडाउनु एक सरल समाधान हुन सक्छ, यद्यपि यो सबै उपकरणहरूको लागि सिफारिस गरिएको कुरा होइन। थप रूपमा, केन्द्रीकृत स्थापनाहरूमा यसलाई पहुँच गर्न सामान्यतया गाह्रो हुन्छ। यसलाई केही मिनेटको लागि तातो मोडमा बदल्नु अर्को समाधान हुन सक्छ।
एकाइको बाहिरी भाग सफा गर्नुहोस्
यद्यपि सबैभन्दा नाजुक भागहरू एकाइ भित्र सुरक्षित छन्, यो पनि आवश्यक हुनेछ उपकरणको बाहिरी भागको हेरचाह गर्नुहोस् ताकि यसमा धूलो र फोहोर जम्मा नहोस्। र तपाईं यसलाई सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ जबसम्म उपकरण पहुँचयोग्य ठाउँमा छ।
भ्याकुम र थोरै ओसिलो कपडाले इकाईलाई बाहिर सफा राख्न मद्दत गर्नेछ। ग्रिल, एयर इनटेक फिन र आवरण सफा गर्न कुनै विशेष उत्पादन प्रयोग नगरी नयाँ जस्तै राम्रो हुनेछ।
कहिले सफा गर्ने?
सामान्यतया, यो वसन्तमा सुरु गर्नु अघि र गर्मीमा लामो समयसम्म प्रयोग पछि एयर कन्डिशनर सफा गर्न सिफारिस गरिन्छ। नियमित रूपमा वर्षमा दुई पटक धेरै समस्याबाट बच्नुहुनेछ। थप रूपमा, हामीले केही सामान्य सफाई गर्दा यन्त्रलाई बाहिरी रूपमा सफा गर्नमा कुनै असर गर्दैन।
हाम्रो घरमा जति सफा हावा प्रवाह हुन्छ, त्यति नै समस्या कम हुन्छ भनी भन्नु हुँदैन। तंबाकू, चिम्नी धुवाँ वा भान्साकोठाले स्थितिलाई अझ खराब बनाउन सक्छ र थप नियमित र गहिरो सरसफाईको आवश्यकता पर्दछ।
हामीले तपाईंलाई साँचोहरू दिएका छौं ताकि तपाईं आफ्नो घरमा एयर कन्डिसनरहरू सफा गर्न सक्नुहुन्छ तर सधैं पढ्न नबिर्सनुहोस् निर्माताको निर्देशन पुस्तिका तपाईंले समस्याहरूबाट बच्नको लागि यसलाई सुरु गर्नु अघि। प्रत्येक टोलीको आफ्नै विशेषताहरू छन्।
अन्तमा, जब शंका छ, हामी तपाईंलाई एक पेशेवर कल गर्न वा स्थापना मर्मत सेवालाई सम्पर्क गर्न सल्लाह दिन्छौं। स्प्लिटहरू नाजुक मेसिनहरू हुन् जसलाई निश्चित समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम हुन योग्य श्रम चाहिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » खराब गन्धबाट बच्न एयर कन्डिसनर सफा गर्नुहोस्